Maalinta: Diseembar 24, 2019
Khariidadda East Express Route Map 2020: Gaar ahaan caan ku ah dhalinyarada, East Express waxay ka baxdaa Ankara waxayna gaartaa Kars oo ka timaadaa Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan iyo Erzurum. 5 - 10 daqiiqo sugitaanka saldhigyada dhexe [More ...]
Boqolkiiba 570 ee 61,4 kun ee dadka la wareystey kuma qanacsana gaadiidka dadweynaha. Laxiriirta gaadiidka dadweynaha ee magaalada, oo dhib weyn ku ahaa shacabka muddooyinkan ilaa waqtigan; [More ...]
Ekrem Imamoglu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM), ayaa bixin doona macluumaad ballaaran oo ku saabsan mashruuca Channel Istanbul, oo ay ku jiraan borotokoolka IMM, oo uu ku dhawaaqay in la kansalay. Waxaa lagu qaban doonaa subaxnimada berri (Arbacada, 25ka Diseembar) saacaddu markay tahay 09:30 xilliga dhismaha Xarunta Ilaalada Xarunta Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ee Saraçhane. [More ...]
Wadooyinka Istanbul ayaa ah mowduuca tartanka sawir qaadista. Amateur iyo xirfadle qof walbaa wuu ka qeybqaadan karaa tartanka sawir qaadista, laga bilaabo Istanbul oo dhan, wadooyin qurux badan oo kala duwan, isgoysyada, tuneesooyinka ayaa midba midka kale kula tartami doona. 10 kun ee ugu horreeya TL [More ...]
Gawaarida tareenka ee Mareykanka ayaa ku rogmaday buundada wabiga. Wuxuu sheegay inuusan dhiman ama dhaawacmin. Gawaarida xamuulka qaada ayaa ku dul dhacay buundo ku taal Harpers Ferry, Virginia, USA [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu'nun wuxuu ka qeybgalay xaflada dib loo bilaabay howlihii khadka tareenka Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 1 bil kadib nasashada, laakiin mashiinka tunnel-ka lama soo degsan karin goobta dhismaha. Sida ku xusan warkii warka ee bisil ee Kızıltepe; "Istanbul [More ...]
Waqtiga Sugitaanka Waa La Yareeyay 5 Waqtiga Isgoyska Bursa Gürsu
Qorshahan cusub ee ay sameysay Dawladda Hoose ee Bursa ee ku taal Isgoyska Gürsu, waqtiga sugitaanka ee nalka cas ayaa la yareeyay 5 jeer. [More ...]